Qoorta oo fidisa - Jimicsiyada Aasaasiga ah ee ay tahay inaad Ogaato | Bezzia
Jimicsiga iyo fidinta qoorta
Susana godoy | 14/09/2021 16:00 | Jimicsiga
Maanta in ka badan tababar laftiisa ah, waxaan dooneynaa inaan nafteena u qaadanno taxane ah jimicsiga qoorta ama fidinta. Sababtoo ah sidaan si fiican u naqaanno, waa mid ka mid ah meelaha ugu murugsan, oo aad u xanuunsan kara. Qoorta oo xanuunta ama xataa dawakhaad sababtan awgeed ayaa ah kala dambaynta maalinta nolosheena.
Sidaa darteed, haddii ay ku jirto gacmaheena ka hortagga ama hagaajinta, wax ka wanaagsan ma jiraan. Sidaa darteed, waa inaan maanka ku haynaa inay jiraan layliyo taxane ah oo aan awoodi doonno inaannu qoorta ka sii dejinno. Maadaama qaar ka mid ah dhibaatooyinka afka ilmagaleenka ay la xiriiraan qandaraasyo. Miyaan bilownaa?
1 Qoorta dhinaca dambe ayaa fidsan
2 Madaxa siman ayaa soo jeesanaya
3 Qoorta ayuu fidiyaa oo garka ayuu qabtaa
4 Lafdhabarta ayaa sidoo kale u baahan in la kala bixiyo
Qoorta dhinaca dambe ayaa fidsan
Layligani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo lagu daro, waxaan sidoo kale ku heli karnaa qaabab kala duwan. Mid ka mid ah waa in aan samayn karno annagoo fadhisan, ka tagnay gacmaha hoos iyo garbaha sidoo kale. Haddii aan labada meelood xoog yar ku samayno, ayaa ka sii fiican. Waqtigaas waa inaad qoorta u leexisaa dhinaca, sidii in dhegtaadu doonayso inay taabato garabka. Waa muhiim inaadan weligaa is qasbin oo jimicsiga si tartiib ah u samee. Waxaad ku samayn doontaa dhinaca midig ka dibna bidixda ama dhanka kale
Dabcan Kala duwanaansho kale oo ka mid ah fidinta qoorta ayaa ah in lagu sameeyo gacan gacan.. Halkii aan gacmaha hoos uga tagi lahayn, waxaan gacanta ku qabannaa madaxa annaga oo gacanta ku haya dhinaca aan rabno in aan iska fidinno. Markaas waxaan sii joogi doonaa dhowr ilbidhiqsi oo sidan oo kale ah si aan ugu beddelno dhinaca kale. Gacantaada ha ku isticmaalin cadaadis aad u badan, waa uun waxtar.
Madaxa siman ayaa soo jeesanaya
Waxaan sidoo kale ku beddeli karnaa laylisyada ama fidinta qoorta kore midkan. Waa kan ugu fudud maxaa yeelay waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad awoodid inaad samayso fadhiga iyo taagan labadaba. Labada xaaladoodba, booska bilowgu waa isku mid maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaan hoos u dhigno gacmaha iyo sidoo kale garbaha. Markay diyaar noqoto, waa wakhti aad madaxa ruxdo. Yacni, waxaan u leexan doonnaa hal dhinac ka dibna dhinaca kale Waxaas oo dhan si tartiib ah si looga fogaado dawakhaad aan la rabin. Waa hab ku habboon in lagu dhaqaajiyo muruqyada aagga trapezius.
Qoorta ayuu fidiyaa oo garka ayuu qabtaa
Sidee bay u yaraan kartaa, waxaan wajahaynaa mid kale oo ka mid ah laylisyada ugu fudud ee la sameeyo. Waxay ku saabsan tahay in jidhku toosnaado, taas oo ah, qaybta laabta ma dhaqaaqi karto. Halkaas waxaa ka dhaqaaqi doona qoorta iyo garka. Sababtoo ah waxaan samayn doonaa dhaqdhaqaaq qoorta hore ah. Waxaan qiyaasi karnaa inaan leenahay qoor caag ah waxaanan rabnaa inaan fidinno inta ugu badan ee suurtogalka ah, laakiin hoos uma dhigno. Ka taxaddar inaadan dhaqdhaqaaqin jirka intiisa kale. Markaan fidinay, waa waqtigii qoortaas la uruurin lahaa annaguna gadaal ayaan ka yeeli doonnaa annagoo garka gabi ahaanba ku dhejineyna.
Lafdhabarta ayaa sidoo kale u baahan in la kala bixiyo
In kasta oo aan diirada saareyno qeybta qoorta, waa run in laf -dhabarku sidoo kale midaysan yahay una baahan yahay inaan tixgelinno. Waxaa jira layliyo badan oo aan u samayn karno iyada, laakiin kiiskan waxa aan isku dayi doonno waa in dhaqdhaqaaqyadu midaysan yihiin oo waliba qoorteena loo qaabeeyey. Markaa, waa inaad si toos ah u toosnaataa. Si kale haddii aan u dhigno, sidii in duni madaxaaga kor kuugu soo jiidayso. Xaaladdan waxaan u baahanahay fidin dhabarka iyo qoorta laakiin dhammaantood adigoon qasbin, in kasta oo inta badan aan samayn karno si ka sii wanaagsan. Kadibna waan is dejinaa oo waxaan ku noqonnaa booskii bilowga. Qoorta si toos ah ayay u socon doontaa taasna, garka ayaa hoos u yara dhacaya sida haddii aad rabto inaad calaamadiso garka labanlaaban. Ma heshay? Kadib samee dhowr ku celcelin waxaadna ogaan doontaa isbeddelka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Jimicsiga » Jimicsiga iyo fidinta qoorta
Sirta Guurka: Taxanaha HBO Waa inaad Aragtaa